စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်သူ | GUANYOU
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်နိုင်တဲ့ စက်ယန္တရား။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို အာရုံစိုက်ပါ။
2-piece Can Body ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Ring/lid/end Production Line လုပ်နိုင်သလား
Fully Auto Palletizer စနစ်
3-piece Can Body ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက် 2-piece Can Body Machine
Round Can Making စက်
အလိုအလျောက် အသံမြည်/အဖုံး/အဆုံး စက်
အလိုအလျောက်3ပိုင်း Can Body Machine
Round Paint လုပ်နိုင်သောစက်
စတုဂံပုံ ဆေးသုတ်နိုင်သော စက်
Square Can လုပ်တဲ့စက်
အစားအသောက် ချက်ပြုတ်နိုင်သော စက်
တစ်ပိုင်း အော်တို/အဖုံး/အဆုံး စက်မြည်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် CAN ဖြစ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေတိုင်းကို ပြုလုပ်သည်။
Can Making Machine Supplier မှ Can Body Line 3-Piece
3-Piece Can Body Line သည် GUANYOU MACHINERY မှ Can Making Machine မှဖြစ်သည်။SHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအစာဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol ဗူး၊ ဓာတုဗူးနှင့် အထွေထွေသုံးဗူး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။
စက်ရုံစျေးနှုန်းဖြင့် Professional 2-piece Can Body ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
GUANYOU စက်မှ ထုတ်လုပ်သည့် Can Body Production Line2ခုSHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအစာဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol ဗူး၊ ဓာတုဗူးနှင့် အထွေထွေသုံးဗူး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။
GUANYOU စက်မှ စက်အဖုံး အဆုံးလိုင်းSHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအသောက်ဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol ဗူး၊ ဓာတုဗူးနှင့် အထွေထွေသုံးဗူး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။
အရည်အသွေးမြင့် 200 CPM Fully-Auto Robot Arm Palletizer
GUANYOU စက်မှ အရည်အသွေးမြင့် 200 CPM Fully-Auto Robot Arm PalletizerSHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအသောက်ဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol ဗူး၊ ဓာတုဗူးနှင့် အထွေထွေသုံးဗူး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းအဖွဲ့သည် စက်များဖန်တီးရာတွင် အတွေ့အကြုံ7နှစ်ကျော်ရှိကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကို အနည်းဆုံး နိုင်ငံပေါင်း 15 နိုင်ငံသို့ ရောင်းချခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
SHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအသောက်ဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol can၊ chemical can and general can ect. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်နှင့် လျှပ်စစ်အဖွဲ့ ရှိသည်
အလိုအလျောက် 10kg/15kg-20kg Square Can Body ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
GUANYOU စက်မှ အလိုအလျောက် 10kg/15kg-20kg စတုရန်းကိုယ်ထည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းSHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သော စက်များ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ထုပ်ပိုးသည့် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ဆီချက်လုပ်သည့်စက်နှင့် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအသောက်ဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol can၊ chemical can and general can စသည်တို့အတွက် စက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ကလပ်လုပ်နိုင်သည့်စက်၊ ဘဲဥပုံပြုလုပ်သည့်စက်၊ အရက်ချက်သည့်စက်၊ သတ္တုထုပ်ပိုးသည့်စက်၏ ပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းအဖြစ် အလိုအလျောက်နှိပ်လိုင်း။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် ထုပ်ပိုးသည့် စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်သူနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသည်။
အိန္ဒိယဈေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး 18L Square Can ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
GUANYOU စက်မှ 18L Square Can ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းSHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအသောက်ဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol ဗူး၊ ဓာတုဗူးနှင့် အထွေထွေသုံးဗူး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။
အင်ဒိုနီးရှားဈေးကွက်တွင် ဘီစကွတ်အဝိုင်း 265 ဘီစကစ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလိုအလျောက် 265 အဝိုင်း ဘီစကစ် လုပ်နိုင်သည့် လိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။သော့ခတ်ချုပ်ရိုးစက်မှ (ကောက်ကြောင်းနှင့်&flanging) - ချုပ်လုပ်ထားသောစက်မှ beading စက်၊ turn-key ပရောဂျက်။သင့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော စွမ်းရည်အမျိုးမျိုး။
Auto Double Sheet Rejector ဖြင့် အော်တိုဂဟေဆော်သူ
GUANYOU MACHIENRY မှ Auto Double Sheet Rejector ဖြင့် အော်တိုဂဟေဆော်သူSHANTOU GUANYOU စက်ပစ္စည်း CO.,LTD. နည်းပညာမြင့် စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဖျော်ယမကာဗူး၊ အစားအစာဗူး၊ နို့မှုန့်ဗူး၊ aerosol ဗူး၊ ဓာတုဗူးနှင့် အထွေထွေသုံးဗူး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်ယန္တရားပြုလုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ1. Omron စနစ်2. Auto Double Sheet Rejecting စနစ်3. Ceramic Rollers များ၊4. Three Dots စနစ်5. Mercury Free စနစ်
အခုပဲ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖန်တီးမှုအတွက် ကတ်တလောက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။